टेटर टट क्यासरोल - व्यंजनहरु
के कुखुरा सिजर सलाद संग राम्रो हुन्छ
मारीनारा चटनी टमाटर चटनी जस्तै छ
चकलेट केले केक केक मिक्स प्रयोग गरेर
आइसक्रिमको साथ सुन्तला क्रीमसामिकल मद्यपान
रोटी crumbs साथ फ्राई tilapia व्यंजनहरु
टेटर टट क्यासरोल
टेटर टट क्यासरोल बनाउनको लागि एक अविश्वसनीय सजिलो डिश हो र सबैजनाले यसलाई सँधै मनपर्दछ!
को तहहरु टेटर सबै मासु र सब्जीहरू साधारण सासमा कभर गरिन्छ र तातो र बबलीसम्म पकाइन्छ। यो सजिलो छ, मलाई क्रीम र ओह यति स्वादिष्ट!
सबै भन्दा राम्रो पक्ष हो, यो टेटर टोट क्यासरोल यति बहुमुखी हो तपाईंको फ्रिजमा के आधारमा छ!
मलाई कसरोल मन पर्छ Unstuffed बन्दकोबी रोल पुलाव लाई घरेलु म्याक र चीज , त्यहाँ केवल तातो र bubbly खाना भट्टी बाहिर आउँदै को बारे मा सान्त्वना केहि चीज छ। जबकि यो सजिलो टेटर टट क्यासरोल अहिलेसम्मको सबैभन्दा उत्तम पकवान होईन, यो पक्कै पनि अचम्मको स्वाद हो।
त्यहाँ सबै संस्करणहरू मध्ये, म निश्चित रूपले यो उत्कृष्ट टेटर टट क्यासरोल हो भन्ने सोच्दछु किनकि सँगै राख्नको लागि यत्तिको सजिलो छ तर वास्तवमै स्वादमा वितरित हुन्छ (राम्रोसँग, यो र पक्कै पनि) मेक्सिकन टेटर टट क्यासरोल )।
जमिनको मासुले भरिएको टमाटरको लागि विधि
म ढिलो कुकरको तल टेटर टट्सको लेयरबाट सुरू गर्दछु (मaप्रयोग गर्दछु 4QT CrockPot यस नुस्खाको लागि), र यसमा ग्राउड गोमांसको एक तहको साथ शीर्ष। म स्थिर फ्रिजहरू सिधै फ्रिजरबाट प्रयोग गर्दछु मतलब प्रिप आवश्यक पर्दैन र त्यसपछि टेटर टट्सको अर्को लेयरको साथ शीर्षमा।
द्रुत र साधारण सास थोरै चीजसँग थपियो र यो सबै क्रोकपटमा पूर्णतामा पकाउँदछ। सजिलो peazy सही ?!
एक पटक पकाएपछि, यो टेटर टट क्यासरोल एकदम स्वादिष्ट छ र वास्तवमा मलाई कुटीज पाईको सम्झना दिलाउँछ (जुन उस्तै हो गोठालोको पाइ भेडाको सट्टामा गोमांसको साथ)। आश्चर्यजनक रूपमा पर्याप्त, ढिलो कुकरमा यसलाई पकाउँदा तपाईं अझै पनि किनाराहरूमा क्रोस बिटहरू पाउनुहुन्छ (जुन मेरो मनपर्ने अंशहरू मध्ये एक हो)।
जब म स्थिर सब्जी प्रयोग गर्दछु, तपाईं पनि यो रेसिपीमा ताजा भेजीहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। फ्रिज गरिएकोले यसलाई सजिलो बनाउँदछ किनकि तिनीहरूलाई कुनै पूर्वतय्य आवश्यक पर्दैन, म तिनीहरूलाई केवल एउटा चाँडोमा कुँडो दिन्छु र ढिलो कुकरमा राख्छु। यदि तपाईं ताजा सब्जीहरू प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने, तिनीहरूलाई पूर्व-पकाने आवश्यक छैन, तिनीहरूलाई एकदम सानो पासा गर्नुहोस् र तिनीहरूले बाँकी डिशको साथ पकाउनेछन्।
के म सुँगुरको मासु जमेको चीजबाट पकाउन सक्छु?
सम्पूर्ण डिशले तपाईलाई शाब्दिक रूपमा लिन सक्दछ तपाईको भित्र हाल्नको लागि केही मिनेट ढिलो कुकर र तपाईं हात मा केहि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ! मैले यस टेटर टोट क्यासरोलमा दुबै जमिनको मासु र स्थिर तरकारीहरू थपेको छु तर तपाईंसँग भएको कुनै पनि बचेको गोमांस, कुखुरा वा टर्की प्रयोग गर्नुहोस्!
जबकि म प्राय जसो स्लो कुकरमा पकाउछु, अवश्य टेटर टट क्यासरोल ओभनमा पकाउन सकिन्छ गोल्डन पूर्णता पनि। केवल बीफ लेयरलाई × pan १ pan पनमा राख्नुहोस् (वा कुनै पनि क्यासरोल डिशले गर्दछ) र शीर्षमा भेज्जीहरू र त्यसपछि टेटर टट्समा। चीज र साससँग छर्कनुहोस् र 30०० ° F मा 30० मिनेटको लागि वा गोल्डन र बब्लीसम्म बेक गर्नुहोस्।
यो सजिलो स्लो कुकर टेटर टट क्यासरोल आफैंमा एक पूर्ण भोजन हो तर हामी प्राय: राम्रो ताजा हरियो सलाद र केही क्रस्टि रोटी सहित सेवा गर्दछौं!
इजी टेटर टट क्यासरोल
तयारी समयबीस मिनेट कुक समय3 घण्टा कुल समय3 घण्टा बीस मिनेट सर्भिंगहरू। सर्विंग्स लेखकहोली निल्सन ढिलो कुकरमा बनेको, यो स्वादिष्ट खाना खाना तयार गर्ने क्रममा छिटो र सजिलो छ! प्रिन्ट गर्नुहोस् पिन
▢१ टेटर टट्सको झोला लगभग 32२ औन्स
▢१ पाउन्ड दुबै जमिनको मासु
▢१ सानो प्याज पासा
▢दुई कप मिश्रित तरकारीहरू ताजा वा स्थिर
▢१० ½ औन्स च्याउ सूप को क्रीम
▢१ कप दूध
▢१ चम्मच सुख्खा रायो
▢दुई कप चेडर चीज काटिएको
मध्यम गर्मीमा खैरो ग्राउन्ड गाई र प्याज कुनै गुलाबी नहोउन्जेल। कुनै बोसो निकाल्नुहोस्।
कचौरामा सूप, दूध, लसुन पाउडर, सुख्खा रायोको र नुन र मिर्च मिसाउनुहोस्। छुट्याइएको
टेटर टटसको आधा स्थानमा ग्रिस गरिएको q क्यूटी ढिला कुकरमा राख्नुहोस्।
तह गोमांस, मिश्रित तरकारीहरू, बाँकी टेटर टट्स र अन्त्यमा पनीर।
माथि सॉस खन्याउनुहोस्, कभर गर्नुहोस् र उच्च hours- hours घण्टामा वा कम hours घण्टामा वा तबसम्म गरम नभएसम्म पकाउनुहोस्।
क्यालोरिज:8 348,कार्बोहाइड्रेट:१२g,प्रोटिन:24g,मोटो:२g,पागलिएको बोसो:१२g,कोलेस्ट्रॉल:83मिलीग्राम,सोडियम:1 56१मिलीग्राम,पोटासियम:7०7मिलीग्राम,फाइबर:दुईg,चिनी:१g,भिटामिन ए:2726IU,भिटामिन सी:6मिलीग्राम,क्यालसियम:9०मिलीग्राम,फलाम:दुईमिलीग्राम
कीवर्डटेटर टट क्यासरोल कोर्सबेलुकाको खाना पकाइयोअमेरिकी© SpendWithPennies.com। सामग्री र फोटोग्राफहरू प्रतिलिपि अधिकार सुरक्षित छन्। यस नुस्खाको साझेदारीलाई दुवै प्रोत्साहन र सराहना गरिन्छ। कुनै पनि सोशल मिडियामा पूर्ण रेसिपीहरू प्रतिलिपि गर्न र / वा टाँस्न कडा निषेधित छ। कृपया यहाँ मेरो फोटो प्रयोग नीति हेर्नुहोस् ।
यस सुपर क्यासरोललाई पुन: मुद्रित गर्नुहोस्
ढिलो कुकर कुखुरा एक ला राजा
Taco Tater Tot Casserol!
स्लो कुकर सलिसबरी स्टेक
ग्रिल नुस्खा मा रातो आलु